Cessna tikeeti Excel XLS + FSX & P3D / ụgbọelu ailerons na-adịghị arụ ọrụ nri
ajụjụ Cessna tikeeti Excel XLS + FSX & P3D / ụgbọelu ailerons na-adịghị arụ ọrụ nri
1 afọ 8 ọnwa gara aga #648 by julian1245
Hello Rikoooo i ga-achọ ịjụ gị ụmụ okorobịa banyere nke a ụgbọelu. M na-ahụ n'anya nke a ụgbọelu na MFSXS na ọ bụ oké ma im na-ahụkarị a nsogbu na ụgbọelu nke na-bụ n'ezie manụ m. Ọ bụ a glitch na ailerons ebe mgbe ị na-atụgharị ha na-amasị spazz si. The ụgbọelu amama ma ọ anya uche na-adịghị m na-awagharị awagharị na ọ bụrụ na ị nwere ike, site na ohere ọ bụla, nwere anya na idozi ya na dị ka a na-emelite version ma ọ bụ ihe i n'ezie ga-hụrụ ya n'anya ma ọ bụrụ na ọ bụ fix n'ihi im enwe oké fun na ụgbọelu. Im n'aka ma ọ bụrụ na ọ na ihe na egwuregwu ma ọ bụ ma ọ bụrụ na im na-eme ihe na-ezighị ezi mgbe im wụnye ya.
Ekele ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwetara ọ bụla echiche.